Mampiasà hitsin-dàlana fitendry amin'ny Mac hampavitrika ny screensaver | Avy amin'ny mac aho
Ampandehanana ny screensaver miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry amin'ny OS X
Azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no te hampihetsika amin'ny tanana ny screensaver an'ny Mac anao tsy mila miandry mandalo fotoana voafetra mba hampavitrika azy ho azy, izany hoe, amin'ny alàlan'ny fanindriana lakile na fitambaran'izy ireo fotsiny dia azonao atao ny mampihetsika azy ary mifoha handany fotoana amin'ny fanaovana asa hafa. Ity dia manana vahaolana izay ho azontsika atao noho ny Automator izay hamoronana serivisy ho an'ity.
1 TONGAVA NY SERVICE
2 KEYBOARD SHORTCUT
TONGAVA NY SERVICE
Raha mazava, ity serivisy ity dia hametraka ny screensaver default fa efa nofidintsika mialoha, izany hoe ilay voafidy tao amin'ny takelaka fidiana amin'ny birao sy ny pikantsary izay hidirantsika avy amin'ny menio > System Prefers. Raha te hanova ity screensaver ity isika dia mila manova fotsiny ilay voafantina ary hiasa ho antsika ihany.
Handeha any amin'ny fisie Applications ao amin'ny Finder izahay ary hitantana ny Automator izahayAo amin'ny efijery manaraka dia hifidy «Antontan-taratasy vaovao» sy «Serivisy» izahay. Raha vantany vao vita izany, dia hijery ao amin'ny Actions ho an'ny "start the screensaver" ary hotaritarintsika mankany amin'ny panel eo ankavanana, avy eo aorian'izay dia hovainay ny variable ny serivisy mandray "tsy misy angon-drakitra fampidirana" ho "misy fampiharana".
Vantany vao vita io dia handeha eo amin'ny menio File> Save ary hitahiry azy amin'ny anarana mazava sy fohy toy ny, "Start screensaver". Ankehitriny dia mitoetra ihany ny manome fitambarana manan-danja hampavitrika azy.
Araka ny efa nolazaiko tany am-piandohana, raha hanovana io safidy io dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio > System Prefers> Keyboard> Fomba haingana. Amin'ity fotoana ity dia hitady ny serivisy izay noforoninay fotsiny izahay mba hanomezana hitsin-dàlana fitendry azy izay tadidintsika mora foana, zavatra toa an'i Alt + CMD + 1 ohatra.
Ankehitriny rehefa miasa na mampiasa ny fitaovana izahay ary irinay ny hampandeha ilay screensaver dia ho ampy ihany ny manindry io fitambarana io mba mihetsika ho azy tsy misy mihoatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ampandehanana ny screensaver miaraka amin'ny hitsin-dàlana fitendry amin'ny OS X
Misaotra betsaka, tena manampy. . .
Nandefa tamin'ny Mac ny fandikan-teny